Taageereyaasha Manchester United Oo Ka Cadhaysan Ixtiraam-darrada Uu Ralf Rangnick Kula Kacayo Donny Van De Beek - GOOL24.NET
Taageereyaasha Manchester United Oo Ka Cadhaysan Ixtiraam-darrada Uu Ralf Rangnick Kula Kacayo Donny Van De Beek
Ralf Rangnick ayaa lagu canaantay sida uu ula dhaqmayo xiddiga khadka dhexe ee Donny van de Beek oo uu ku illoobay kursiga kaydka, taas oo ahayd duruuftii uu laacibkani ku jiray xilligii uu Ole Gunnar Solskjaer joogay naadiga.
Van de Beek ayaa xilli dambe beddel kusoo galay ciyaartii FA Cup ee Aston Villa ee Isniintii toddobaadkii hore, isaga oo beddelay Edinson Cavani daqiiqaddii 72aad.
Intii uu ku jiray garoonka ayuu sameeyey dedaal badan, iyadoo uu kooxdiisa ka caawiyey inay dib ula wareegto ciyaarta oo ay ka haysatay Aston Villa, isaga oo ka dejiyey culayskii badnaa ee saarnaa.
Ciyaartii xalay ee Aston Villa ee horyaalka Premier League ee barbarraha 2-2 ah ay ku dhamaysteen, ayaa uu Rangnick kaydka ku illoobay Van de Beek, isaga oo illoobay doorkii uu laacibkani ka qaatay guushii cidhiidhiga ahayd ee usbuucii hore.
Taageereyaasha Manchester United ayaa ka cadhooday go’aanka xulashada Rangnick, waxaanay baraha bulshada ugu soo jeediyeen farriimo canaan u badan oo ay ku muujinayaan sida ay u saluugsan yihiin.
Rangnick ayaa toddobaadkii hore qirtay in Van de Beek uu isbeddel ku sameeyey kooxdiisa markii uu soo galay, waxaanu yidhi: “Ciyaartii Villa ee maanta, ugu yaraan saddex ciyaartoy ayaanu khadka dhexe ku dheelaynay, marar badan ayaanay dhibaato nagu noqotay in aanu ciyaarta maamulno.
“Laakiin 20kii daqiiqadood ee ugu dambeeyey ayaanu beddelnay oo aanu ciyaarrta si fiican u maamulnay markii uu Donny soo galay, waxaananu helnay xalalkayaga weerarka rogaal-celiska.”
Jamaahiirta Red Devils ee baraha bulshada ku canaantay Rangnick ayaa waxay su’aaleen sababta ay ciyaartoy saamaynta intaas le’eg ku yeeshay kulankii FA Cup uu haddana kursiga kaydka u dhigay ee uu waliba ugu illoobay.